Ithayi Yokuguqula Esikhathini esizayo esiseduze, ukugcwala kokuthuthuka kokuhamba kukagesi kusemnyango. Njengomakhi wezingxenye zemoto, uMaxxis ulokhu ecabanga ukuthi angakwazi kanjani ukuklama uhlelo olusebenzayo lwe-smart phone olungabamba iqhaza kulo mkhuba futhi lusize nokusheshisa. UT Razr ithayi elihlakaniphile elakhelwe isidingo. Izinzwa zayo ezakhelwe ngaphakathi zisebenza ngokuqinile izimo ezihlukile zokushayela futhi zinikeza amasiginali asebenzayo wokuguqula isondo. Izinyathela ezinkulu zikhululiwe futhi ziguqula indawo yokuxhumana ngokuphendula isiginali, ngakho-ke thuthukisa ukusebenza kwethrafikhi.
Insiza Yokunconywa Komculo
Insiza Yokunconywa Komculo I-Musiac iyinjini yokuncoma yomculo, sebenzisa ukubamba iqhaza okusebenzayo ukuthola izinketho eziqondile zabasebenzisi bayo. Ihlose ukuphakamisa ezinye izindlela zokuphikisana nezinselelo ze-algorithm autocracy. Ukuhlunga imininingwane sekuyindlela yokusesha engenakugwenywa. Noma kunjalo, kudala imiphumela yekamelo le-echo futhi iphoqa abasebenzisi endaweni yabo yokududuza ngokulandela ngokuthandekayo kwabo. Abasebenzisi bayazihlalela bese bayeka ukubuza ngezinketho ezisetshenziswa ngumshini. Ukuchitha isikhathi sokubukeza izinketho kungangeza izindleko ezinkulu ze-bio, kepha kungumzamo owakha okuhlangenwe nakho okunenjongo.
Insect Sculptures Ukukhangisa Lwesibili 28 Septhemba
Ane Isihlalo Msombuluko 27 Septhemba
Fluid Cube and Snake Ifenisha Smart Sonto 26 Septhemba
Ukuzimela Kwe-Robot Mobile I-Smart Aroma Diffusor Umshini We-Juicer Othomathikhi Ithayi Yokuguqula Insiza Yokunconywa Komculo Upiyano We-Hybrid Okunethezeka